के अब शिल्पा फेरि छविसँगै बस्न थालेकै हुन त ? पूरा जान्कारी हेर्नुहोस
काठमाडौँ। शिल्पा र छविको झगडाले केहीसमय नेपाली चलचित्र क्षेत्र अस्तव्यस्त नै बन्यो । जताततै उनीहरुको घरझगडा र डिभोर्सकोे कुरा आउन थालेका थिए । यो कुरा बाहिर आएपछि छवि र शिल्पा दुवैलाई घाटा भने भएको छ । उनीहरुलाई राम्रो भन्ने दर्शकले पनि अहिले छवि र शिल्पालाई गाली दिन थालेका छन् । यसैबिच नयाँ खबर बाहिरिएको छ । छवि र शिल्पाको डिभोर्सको कुरा बाहिर आएपछि छविकी जेठी श्रीमती हेमा ओझाले छवि र शिल्पाविरुद्ध मुद्दा हालेकी थिइन् ।
अदालतले छवि र शिल्पालाई पक्राउ गर्ने स्वीकृति समेत दिएको थियो । तर अहिले फेरि शिल्पा छविसँगै बस्न थालेको कुरा बाहिरिएको छ । शिल्पाले अब आफू छविसँग बस्नै नसक्ने अन्तवार्तामा बताएकी थिइन् । फेरि अहिले उनी छविसँगै बस्न थालेको कुराले दर्शक अचम्ममा परेका छन् । अब शिल्पा छविसँग बस्न थालेकी हुन् वा होइनन् त्यो भने छवि र शिल्पाले नै भनेपछि थाहा हुन्छ ।
यो पनि पढनुहोस । देवताका गुरु बृहस्पति तथा भगवान श्री हरि विष्णुको पूजा गरिन्छ । आजको दिन व्रत बस्नाले धन, पुत्र तथा विद्या प्राप्ति हुनेछ । पहेलो रंगको कपडा लगाउने र पहेलै वस्तुको दान गरेमा शुभ मिल्नेछ । साथै, यो दिन विष्णुकी पत्नी लक्ष्मीको पनि पूजा गरिन्छ । यो व्रत शुक्लपक्षको पहिलो बिहीबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । त्यस दिन अनुराधा नक्षत्र परेमा असाध्यै राम्रो मानिन्छ । कसरी पूजा गर्ने ? पूजा विधि बिहान स्नानपछि पहेलो वस्त्र धारण गर्ने ।
त्यसपछि पहेलो फूल र चन्दनलाई एक साथ मिलाएर प्रसाद बनाउने । यस प्रसादलाई भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गरौँ । यसबाट भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उहाँको आर्शिवाद तपाईंको घरमा सधैँ भइरहने छ । यो व्रत १३ महिना वा कम्तिमा ७ महिनासम्म लिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । व्रतको दिन शुद्ध भएर पहेँलो कपडा लगाई ‘ऊँ गुरवे नमः’ मन्त्र कम्तिमा पाँच माला जाप गर्नुपर्दछ ।
बिहीबारको व्रत सम्पादन गर्दा केराको रुखलाई पूजा गर्ने चलन छ । पूजा गर्दा पहेँलो चन्दन, चनाको दाल, छाता, मिठाईको रुपमा लड्डु आदिको दान गरेमा लाभ मिल्नेछ । भोजन गर्दा एक छाक नुन बार्नुपर्दछ । पौराणिक कथाअनुसार एकजना प्रतापी र दानी राजा थिए । उनको दरबारमा असाध्यै धेरै सम्पत्ति थियो । उनी प्रत्येक बिहीबार व्रत बस्ने तथा पुण्यकर्म गर्ने गर्दथे ।
तर रानी भने त्यस्तो केही कर्म गर्दिन थिइन् । राजाले गरेको धार्मिक कार्यलाई रानीले असहयोग गर्थिन् । दरबारमा थुप्रिएको सम्पत्तिका कारण आफुले धेरै काम गर्नु परेकोमा उनी चिन्तित हुन्थिन् ।